I-Le Havre phezulu ngokubuka kwe-panoramic - I-Airbnb
I-Le Havre phezulu ngokubuka kwe-panoramic
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Nicolas & Ulrike
U-Nicolas & Ulrike Ungumbungazi ovelele
Indawo yokuthula yeqiniso emaphandleni ikulindile kule ndlu endala yepulazi yamatshe enombono wamaPyrenees.
Itholakala emnyangweni waseTarn oqanjwe ngamaTarnais, "iTuscany encane" enesimo sezulu esimnandi kakhulu kanye nezwe elinamagquma neliluhlaza.
Hhayi kude kakhulu kuzo zombili izilwandle kanye nePyrenees ukuze ube nazo zonke izindlela zokuhlala okuphelele.
Ipulazi elidala elidala elibukeka kahle phezu kwegquma kanye nesivini sangaphambili esinakho konke ukunethezeka kwesimanje, indawo ebekwe kahle nebuyiselwe kahle enokubukwa okuhle kakhulu endaweni.
Indlu evuselelwe kabusha ye-stone farmhouse inamagumbi okulala ama-2 ahlukene, ngalinye linendlu yokugezela yangasese kanye nekhishi elingu-1. Ibheke eningizimu futhi inokubukwa okumangalisayo kokuphuma kwelanga nokushona kwelanga izinsuku eziningi zonyaka. Kwelinye lamakamelo umbhede ophindwe kabili ungashintshwa ube imibhede emibili ehlukene.
Kutholwe ibangana ukusuka edolobheni UNESCO-efakwe ohlwini lase-Albi emnyangweni Tarn, impahla onobuhlobo indawo ekahle ukusizakala ezahlukene izakhiwo zesimanje anikezwa nasemadolobhaneni azungezile kanye nasezindaweni zasemakhaya..
Isifunda sewayini se-GAILLAC singesinye sezindala eFrance futhi sinikeza izinhlobo eziningi zamawayini ekhwalithi ephezulu (ukunambitha kungahlelwa).
Izimakethe ezithokozisayo emadolobheni amahle nama-bastide, aqhelelene nje, ahlinzeka ngemikhiqizo yasendaweni yekhwalithi ephezulu, imibukiso yezandla kanye "nokuthengiswa kwegaraji" kubanjwa unyaka wonke.
Lesi sifunda sinempilo futhi sichuma ngokwezomnotho nazo zonke izinsiza zansuku zonke ezitholakala kalula.
Izixhumanisi zomgwaqo ezinhle kakhulu, ujantshi kanye nezomoya zifinyeleleka kalula: umgwaqo u-A68 uyimizuzu eyi-8, isiteshi sesitimela sasendaweni siyimizuzu eyi-15 kanti isikhumulo sezindiza saseToulouse cishe imizuzu engama-45. Indawo eseduze inokuthula, imizuzu emihlanu nje ukusuka ezikhungweni zendawo. Umbhaki uqhele ngamakhilomitha angu-4.5 futhi isitolo segrosa esincane kodwa esihle. Izitolo ezinkulu ezimbili kanye nenxanxathela yezitolo zikude nge-9km no-15km.
Ibungazwe ngu-Nicolas & Ulrike
Njengoba sihlala lapha, sizophendula yonke imibuzo yakho ukuze senze ukuhlala kwakho kube yinto eyingqayizivele. Ikati lethu elihle lizokwamukela futhi licele ukwanga.
Ukunambitha okuqondisiwe kubakhi bewayini bendawo kungahlelwa ngesicelo.
UNicolas & Ulrike Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Puybegon namaphethelo